Koox Budhcad Ah Oo Gaadhiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Ku Afduubay Wariye Cabdishakuur Heersare | FooreNews
Home wararka Koox Budhcad Ah Oo Gaadhiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Ku Afduubay Wariye Cabdishakuur Heersare
Koox Budhcad Ah Oo Gaadhiga Wasiirka Arrimaha Gudaha Ku Afduubay Wariye Cabdishakuur Heersare
“Waxa Ay Ku Dhawaad 8 Saacadood Kula Maqnaayeen Deegaamada Arabsiyo Iyo Garabis Iyaga Oo Hanjabaad Iyo Qaylo Isugu Daraya”
Hargeysa (Foore)- Koox ka kooban Lix xubnood oo rag ah oo watay gaadhi GT ah oo ay leedahay wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland ayaa shalay abbaaro 11-kii duhurnimo waxa ay agagaarka Jidka If iyo aakhiro ee xaafadda Ibraahim Koodbuur ku afduubeen wariye Cabdishakuur Xaaji Muxumed Heersare oo ka mid ah wariyayaasha idaacadda Hirad ee Hay’adda Free Press wakhtigaasina ku guda jiray hawl-maalmeedkiisa iyaga oo falkan afduubka ah ugu haystay illaa xalay 6-dii fiidnimo ee shalay kadib markii ay wariyaha u qaateen dhinaca Magaalada Arabsiyo iyo deegaanka Garabis.
Wariye Cabdishakuur Xaaji Muxumed Heersare oo xalay nagu soo booqday xarunta wargeyska Foore ayaa faahfaahin ka bixiyey sida falkaasi qafaalashada ahi u dhacay iyo sababta ay kooxdani ku sababeeyeen falkoodan foosha xun. Cabdishakuur Xaaji Muxumed Heersare oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Shalay abbaaro 11-kii duhurnimo aniga oo ku suan xafiiskayga ayaa waxa ila soo hadlay nin. Waxa uu igu yidhi waan ku doonaynaa oo dan baan kuu leenahay. Waxaan ku idhi maxaad iga doonaysaan? Waxa uu yidhi marka aanu ku aragno anaggaa kuu sheegi. Xafiiska ayaan ka soo baxay oo waxaan u tilmaamay goobta xafiiska Free Press ku yaallo oo ah goob dhinaca koonfureed ka soo xigta isgoyska jidka waddo Aakhiro ee xaafadda Ibraahim Koodbuur. Markii aan u soo baxay waxaan arkay gaadhi ay ku taallo taarikada GT ee dawladda waxaanan gartay in gaadhigaasi laga lahaa wasaaradda Arrimaha Gudaha”. Wariye Cabdishakuur Xaaji Muxumed Heersare oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Gaadhigii markii aan gaadhay waxa aan ugu tagay Lix nin. Waxa ay igu khasbeen in aan khasab gaadhiga soo fuulo. Waan ka diiday muddo kadib muran badan oo na dhex maray waxa uu mid ka mid ahi soo saaray warqad uu ku qoran yahay maqaal lagu aflagaadaynayo Wasiir Cali Warancadde oo lagu baahiyey Website-ka oodweynenews. Waxa aan u sheegay in aanan website-kaasi wax shaqo ah ku lahayn anna aanan maqaalkaasi qorin. Waxa aan u sheegay ninka masuulka ka ah website-kaasi. Cago juglayn iyo handdaad kadib Waxa ay igu khasbeen in aan la raadiyo ninka webka leh. Sidaasaanay khasab gaadhigii igu saareen. Waxa ay u soo dhaqaajiyeen dhinaca Guriga Wasiir Cali Warancadde ee xaafadda New Hargeysa. Gaadhigii waan ka degnay waxaanay ku xereeyeen guriga Wasiir Cali Warancadde waxaanay la soo baxeen gaadhi kale oo leh taarikada dadweynaha. Sidaasaanay igu qaateen”.
Intaa kadib kooxdani waxa ay Wariyaha u sheegeen in ay yihiin rag ay wasiir Cali Warancadde ehel yihiin sidaa darteed ay ku ciqaabayaan maqaalkan wasiirka laga qoray, iyaga oo intaa kadib ku khasbay in uu u geeyo ninka webka maqaalkan lagu qoray iska leh. Intaa kadib wariye Cabdishakuur heersare waxa uu la xidhiidhay masuulkii mareegtaasi oo sheegay in uu ku sugnaa Arabsiyo. Kooxdii waxa ay wariyaha ku khasbeen in ay Arabsiyo ugu tagaan ninka webka leh haddii kale ay isaga ka jarayaan maqaalka ay ka cabanayeen iyaga oo intaasi handadad iyo caga juglayn xooggan ku hayay. Mudadii ay kooxdani dhexda ku sii jireen ee ay afduubka ku haysteen Cabdishakuur Heersare waxa mid ka mid ahi la xidhiidhayay qof kale oo u muuqday qofka isagu isku xidhayay hawlgalkan (Mission) isaga oo lahaa “Ninkii waan haynaa, soo dir shidaalkii, qadadii iyo qaadkii”.
Intaa kadib kooxdii markii ay wariyaha la tageen Arabsiyo waxa loo sheegay in ninkii ay u socdeen tagay deegaanka Garabis isaga oo raacay qoys aroos ahaa oo halkaasi tagay, sidaasaanay kaga daba tageen. Kooxda afduubka gaysatay iyo wariye Cabdishakuur waxa ay la kulmeen masuulkii website-ka oodweyne iyaga oo uga warramay sida arrinkani u dhacay waxaanu masuulkii kooxdan ku qanciyey in qof akhriste ahi maqaalkaasi soo qoray si khalad ahna shabakadda loogu faafiyey uuna ka cudurdaaranayo, balse kooxdii aanay ku qancin sida arrinkaasi uga dhacay waxaanay dib ula soo noqdeen wariyaha ay afduubteen iyaga oo dabinta qaniinsan oo ka xun sida uu uga dhicisoobay fal ay doonayeen in ay wariye Heersare gacanta ku saaraan, taasina ay ka muuqatay dhexdooda oo isku canaananayay sida ay arrinkan u waajaheen.
Ugu dambayn kooxdii, waxa ay wariye Cabdishakuur Heersare keeneen oo ku dejiyeen abbaaro Lixdii fiidnimo badhtamaa suuqa Hargeysa iyaga oo wali hanjabaad iyo caga juglayn ku haya uguna hanjabaya in uu soo caddeeyo cidda waxan ka qortay wasiirka, marnabana aanay u qudhqudhsanayn sida aanu isagu wax shuqul ah ugu lahayn qoraalkaasi. Waxaanay markii dambe kooxdani isku dayaysay in ay dambabasaan falkan foosha xun ee ay wariyaha kula kaceen.
“Kooxdani waxa ay ahaayeen rag gaangis ah oo ay ehel yihiin wasiir Cali Waranacdde, waxa ay igu khasbayeen in aan khasab ku sheegto qoraal aanan waligay arag cid qortayna aanan garanayn. Waxa nasiib darro ah in gaadiidkii Wasiirka dalka ammaanka u qaabilsani lahaa aan in ka badan 7 saacadood ugu afduubnaa koox budhcad ah, waa arrin layaab igu noqotay oo aanan marnaba filayn” sidaa waxa yidhi Wariye Cabdishakuur Xaaji Muxumed Heersare oo ka warramayay falkii shalay lagu qafaashay.
Previous PostYuusuf Indho Cadde Oo Sheegay In Ninka Cusub Ee Alshabaab Dooratay Ka Mid Ahaa Kooxdii Lacagta Ku Dhacday Wajaale Next PostWax Ka Baro Taariikh Nololeedkii Hogaamiyaha Cusub Ee Loo Doortay Hogaanka Xarakadda Al-Shabaab